Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Nokia Lumia 920
Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Nokia Lumia ah 920
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Nokia Lumia ah 920
Falanqeynta muuqan, xukun wireless, About-xasaasi ah la taabto iyo smartshot, Nokia Lumia 920 ayaa ugu dambeyntii la sii daayay. Arrintan oo uu weheliyo Windows Phone nidaamka 8, waa sheyga ugu muhiimsan ee Nokia. Waa heer sare-phone smart. Si kastaba ha ahaatee, xogta sida sawiro tayo sare leh oo laga qaaday waxaa ay weli laga yaabo in laga badiyay. Marka Lumia 920 khasaaro xogta arrintan soo food saartay, waxaad marka hore hubin karaan in Lumia 920 ayaa synced la Zune in your computer ama aan. Haddii aad leedahay, waxaad soo kaban karto, Lumia 920 xogta laga gurmad ay sameeyeen software in. Haddii aan, aad u baahan tahay si aad u hesho barnaamij soo kabashada xogta.
Nokia Lumia 920 la xiran karo computer iyo aqoonsaday drive adag on your computer. Taas macnaheedu waa in barnaamijka xog ah in uu awoodo in uu ka soo kabsado xogta ka drive adag kaa caawin kara. Wondershare Photo Recovery ama Wondershare Photo Recovery for Mac waa barnaamij sida in uu yahay awood kabsaday sawiro, muusig iyo cajallado fiidyow ka Lumia 920 ah.
Waxaad ka heli kartaa version tijaabo ah ugu horeysay Wondershare Photo Recovery ah.
Qabtaan Lumia 920 Photo Recovery in 3 Talaabooyinka
Wax First hore, oo aad jeclaan stop fiican adiga oo isticmaaleya isticmaale Lumia 920 marka photos yihiin laga badiyay. Nooc kasta oo xog cusub overwrite kartaa sawiro lumay.
Halkan waxaan ku soo kabsado sawiro ka Lumia 920 la Wondershare Photo Recovery dadka isticmaala Windows. Haddii aad tahay user Mac ah, waxa kale oo aad ku buuxin kartaa dib u soo kabashada ee talaabooyin la mid ah la version Mac.
Tallaabada 1 Ku rakib iyo abuurtaan Wondershare Photo Recovery barnaamijka on your computer. Guji "Start" si ay u bilaabaan dib u soo kabashada.
Tallaabada 2 Connect aad Lumia 920 leh ka dibna barnaamijka doonistii bandhigayaa warqad drive ah computer iyo. Dooro warqadda drive in guji "Scan" inaad raadiso photos lumay.
Fiiro gaar ah: waxaad riixi kartaa "Filter Options" in astaysto natiijada iskaanka ah.
Tallaabada 3 Markii scan ay ka badan tahay, dhammaan faylasha helay ka Lumia 920 noqon doono liiska in qaybaha file ama waddooyinkiisa file. Waxaad ku eegaan kartaa sawiro helay ka hor soo kabashada si aad u hubiso in barnaamijkan run ahaantii aad ka caawisaa ama ma. Markaas kaliya aad u baahan tahay ay doortaan sawiro aad rabto in aad dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" in ay dib oo waxaan iyaga ku badbaadin si aad u computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo sawirrada kabsaday dib si aad u Lumia 920 isla markiiba ka dib markii dib u soo kabashada. Haddii kale ee photos lumay laga yaabaa in overwritten.
1 Waxaa runtii muhiim ah in aad joojiso qaadashada Lumia 920 ka dib markii photos yihiin laga badiyay.
2 Marka laga reebo ka sawir uu ka soo kabsaday Lumia 920, waxa kale oo aad soo kaban karto, Cajalado iyo videos ka Lumia 920 barnaamijkan.